Inta lagu guda jiro GOOGLW I / O ee 2012, Google ku dhawaaqay Android version cusub oo lagu magacaabo Jellybean 4.1 iyo abuurtaan Google Hadda. Intaanay laba sannadood Google Hadda ayaa noqday xarun u ah kaaliyaha dalwaddii in ka badan in qof ku caawiya. Google ayaa hadda leh qaababka badan oo waa ka wanaagsan marka loo eego in ay Apple ee Siri. Google Hadda waa loo isticmaalo iyo waxa ay leedahay wax badan oo ka mid ah qaababka. Waxay leedahay set oo ah amarrada cod iyo kaararka iyo shaqeeya sida ay tahay tilmaamaha. Halkan waxa ku jira 10ka muuqaalada laga cabsado ee Hadda Google taas oo aad u faa'iido badan iyo in aadan ka maqnaan.
1. Google Hadda ka caawiyaa Si Weydii Wax kasta oo aad Phone
Tani waa muujinta cabsi badan ee Google Hadda. Waxa aad ka caawisaa in siyaabo badan. Google Hadda ubadan shaqada ay u gaar ah. Haddii aad weydiiso wax si ka dibna waxaad ka heli doontaa jawaab smart in reply. Waxay leedahay set oo ah amarrada cod loo yaqaan Google Voice amrayaa oo sidaas samayn kara hawlaha kala duwan sida beddelaad iyo in la qeexo macnaha erayada. Tusaale ahaan, haddii aad weydiiso su'aal ah "waa kan Madaxweynaha Maraykanka", waxa ay dib u siin doonaa jawaab sida Barrack Obama. Waxaa maqlin erayadayda iyo ka dhigi doonaa falanqayn ku yaal iyo dib la jawaabta saxda ah iyo xal. Tani waa muujinta weyn ee Google Hadda maadaama ay kaa caawin kartaa siyaabo badan. Haddii aad rabto in aad furto gallery iyo ciyaaro hees, ka dibna kaliya aad u baahan tahay inaad u soo sheegtaa telefoonka, sida Google hadda waxa ay aqoonsan doonto iyo furi doonaa gallery iyo ciyaaro heesta sida tilmaamaha our.
2. Google Hadda ka caawiyaa inay u raadso Online iyo Track Baakado ah
Tani waa mid ka mid ah muuqaalada cajiibka ah ee Google Hadda. Waxay kaa caawinaysaa in aad si ay u dukaameystaan ​​iyo gadashada badeecada dukaamada online. Dhab ahaantii taas maanka Google daray feature ah oo lagu magacaabo dukaan iyo track oo aad u saamaxaaya in ay soo iibsan badeecada iyo raad shixnaddaas oo ka mid ah waxyaabaha ay u dhex Ilaalinta. Waxa kale oo aad siin doonaa taariikhda qiyaasta ah ee gaarsiinta ee alaabta ah. Taas waxa loo sameeyaa adigoo emails iyo helo id raadraaca ka.
Tallaabada 4. Riix nidaameed > nidaameed Android inay Lugood marka aad rabto in lagu wareejiyo music iyo playlists ka Samsung Galaxy si Lugood.
3. Google Hadda ka caawiyaa in Calan Xusuusin iyo Ka ogeysiiyo
Google Hadda xusuusinta waa muujinta kale cajiib ah ee Google Hadda. Iyadoo habkaani, kuu sheegi kara Google Hadda inaan idin xusuusiyo ku saabsan wax kasta oo aad u baahan tahay. Tusaale ahaan, haddii aad qabtid dhacdooyin gaar ah ee calendar Google, waxaa idin xusuusin doonaa oo ku saabsan dhacdooyinka ka dhacaya agagaarka iyo sidoo kale wargelinaysaa sida goobta dhacdada.
4. Ka Updated on Movies, Buugaag iyo TV muujinaysaa
Google Hadda waxaad xusuusisaa taariikhda oo ka mid ah dhacdooyin cusub ee kabaha TV sidii ay u cunaa galay xusuusta iyo xusuusin doonaa sida wakhtiga saxda ah ee dhacdooyinka soo socda, si aad u ogaato karaa marka show TV ayaa bilaabmeysa. Haddii aad ka raadin macluumaad kasta oo buugga la xiriira ama wixii ku saabsan fannaaniinta music ama wax filimada on Google, waxa ay si toos ah xusuusan doonaa by Google Hadda oo waxaan siinayaa macluumaadka ku saabsan ka dib. Guud ahaan, Google hadda waa ikhtiyaar fiican si loo helo wararka cusub ee filimada ugu dambeeyay, Buugaag iyo bandhigyada TV.
5. Google Hadda ka caawiyaa in Raadi Song ah.
Haddii aad maqli song taas oo ah mid aad u wanaagsan oo aad rabto in aad u hesho magaca iyo faahfaahinta kale ee heesta, waxaad isticmaali kartaa Google hadda. Just dhaqaaqo telefoonka ku dhow in ay il phone oo weydii Google Hadda "Waa kuwee song yahay?" Dhowr ilbiriqsi gudahood, waxa ay dib u soo celin doonaa faahfaahinta buuxda gabayga iyo faahfaahin ay oo kale. Waxa intaa dheer in, waxa kale oo uu bixiyaa xidhiidh gabayga ah waxay la mid ah waxaa laga heli karaa Google Play.
6. Google Hadda Cards
Google Hadda card asal ahaan waa user interface card kaas oo ku siinayaa noocyada kala duwan ee macluumaadka a. Google waa ku daray muuqaalada card cusub oo ku saabsan update kasta. Tusaale ahaan, Google Hadda waa karaa si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyada oo dareemayaal ku jira casriga ah iyo dhawri doonaa faahfaahinta goobta ayaa ugu taas oo aad la dhigay baabuur ah. Marka aad soo laabtaan aad awoodi doontaa si aad u hesho goobta saxda ah ee gaariga la dhigay.
7. Waxay ka caawisaa si ay u helaan tikidhada ee soo socda Dhacdooyinka
Haddii aad qabto riwaayad ama bandhigyada iyo qaban-qaabiyayaasha ayaa aad saxafadeed tigidhka, Google Hadda waxa uu baaritaanku doonaa Quudiyana macluumaadka galay salkeeda xogta. Waxaa ka dib xusuusin doonaa oo idinka mid ah ay dhacdo iyo u sheeg wakhtiga saxda inuu ka tago dhacdada iyo waqtiga waxaa aad u imaan doono. Waxa kale oo ay bixisaa hal tuubada-helaan xasuusiyo xisaabta Gmail ah, si aad eegi kartaa oo aad marin u tigidhada oo lagu boosta laguu soo dhigo.
8. Google Hadda ka caawiyaa in Karinta
Ma doonaysaa in ay isku dayaan nooc cusub oo ah cunto? Just raadin cuntada kala duwan ee Google Hadda. Waxa ay ku siinaysaa cuntada dhameystiran la animations, sidaas waxaad ku dari kartaa Cuntadan waqtiga saxda ah.
9. Google Hadda ka caawiyaa si ay ula socdaan ilaa inta aad ku socday
Si aad u isticmaasho Google Hadda gaadiidka, Warbixinta Location iyo Location History of Phone waa in la karti. Waxaa loo xisaabiyo doonaa oo muujiya kaarka on bil kasta sida badan aad ku socdeen bishii. Waxaa u xisaabin doonaa iyadoo la isticmaalayo accelerometer telefoonka ee. Ilaa xad, aad dareemi kartaa gudbaya xadka ee u gaarka ah. Sida mar kasta oo aad Google ka furo Hadda, waxa ay si toos ah u gali doonaan wadada fog iyo goobta.
10. Google Hadda ka caawiyaa in ay u safraan aan Stress
Haddii aad ku talajirto in ay magaalada ka baxaan maalmaha ka mid ah, Google Hadda ku siin karaan macluumaad badan. Tusaale ahaan, haddii aad debed u dhoofayso marayo horyaalka, waxa ay ula socdaan doonaa faahfaahinta diyaaradda saxda ah, meelaha iyo khadadka ee magaalada oo aad ku socotay si. Sidaa daraadeed, aad awoodi doontaa in ay ka fogaadaan baahida loo qabo in wax kasta oo ku Hanuuniyaa kale.
Siri VS Hadda Google VS Cortana
20 Google Hadda Talooyin
Wax walba oo ku saabsan Google Haddaba Android
Best 4 Alternaitves in doubleTwist
Bedelka Music ka Mac in ay Android
Top 3 Beddelka iSyncr
Best 3 Alternaitves in SyncMate
Top 4 Lugood Badeli kara ee Android Software
> Resource > Android > Top 10 Google Hadda Maqaallo